त्रिभुवनचोक बैंक ठगी प्रकरण : किर्ते कागजात बनाउन को–को संलग्न ? - Arthapage
प्रकाशित मितिः १३ असार २०७७, शनिबार १०:५५ June 27, 2020
नेपालगन्ज १३ असार : बिभिन्न सरकारी कागजात किर्ते गरी नक्कली धितो मार्फत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक त्रिभुवनचोक शाखाबाट रु १ करोड २५ लाख ऋण लिएको आरोपमा नेपालगन्जका एकजना सुनचाँदी व्यवसायीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ । सोही प्रकरणमा बैंकका प्रबन्धक समेत समातिएका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा नेपालगन्ज –११ का सुनचाँदी व्यवसायी रिजवान अहमद जसगढ छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र मालपोत जस्ता सरकारी कार्यालयका कागजात, सहीछाप किर्ते गरेर जसगढले बैंकबाट रु २ करोड ऋण स्वीकृत गराउन सकेका थिए । तर बाँकी ऋण पाउनु अघि नै उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।
सरकारी कागतजात किर्ते गरी बैंक ठगी गरेको आरोपमा जसगढलाई जेठ २७ गते घरबाटै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डिएसपी सुवास खड्काले जानकारी दिए ।
‘प्रारम्भीक अनुसन्धानबाट जसगढले कयौं सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेर बैंकबाट ऋण लिएको पाइएको छ । अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले थप विषयहरु खुल्दैन जालान् ।’–अर्थपेजसंगको कुराकानीमा डिएसपी खड्काले भने । प्रहरीले जसगढ मात्र होइन यति धेरै किर्ते कागजातका आधारमा ऋण दिने बैंकका कर्मचारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरमा राखेको छ । डिएसपी खड्का भन्छन–‘अनुसन्धानको दायरामा जोजो आउँछन् , हामी छाड्दैनौ ।’
जसगढ एक्लैले यति धेरै सरकारी कागजात किर्ते गरे त ? प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजादा थप व्यक्तिहरु पक्राउ पर्ने सम्भावना छ । यति धेरै सरकारी कागजात किर्ते गर्न एक्लैले नभ्याउने निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ । सरकारी कागजातको किर्ते र त्यसपछि बैंक ठगीमा को–को संलग्न छन् सबै खुल्ने डिएसपी खड्काले बताए । प्रहरीले अहिले सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बैंकिङ कसुरको मुद्दा चल्दा भने बैंकका धेरै अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्नेछन्।
यता संचारकर्मीसंगको कुराकानीमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शम्सेर राणाले किर्ते प्रकरणमा नेपालगन्जका कुनै कर्मचारी संलग्न नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उपमहानगरपालिकाले नै सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुरोध गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।
त्रिभुवनचोक बैंक ठगी प्रकरण : बैंक प्रबन्धक पक्राउ
नेपालगन्जमा पहेंलो सुनले मौलाउदै आर्थिक अपराध
प्रकाशित मितिः १३ असार २०७७, शनिबार १०:५५ |
Prevकोहलपुर बैंकर्स क्लवको अध्यक्षमा रीमा मल्ल
Nextहोटललाई विद्युत महसुल बुझाउन ताकेता